ALIKA MITERAKA: NY FATOTRA - ALIKA
Ny alika lahy dia afaka manomboka manana tsirinaina amin'ny fito volana, fa ny folo volana dia mahazatra kokoa. Ny alika tanora dia tsy manana tsirinaina kalitao. Saika ny alika rehetra dia hanana tsirinaina afaka herintaona.
Ny alika Stud dia eo anelanelan'ny 18 volana ka hatramin'ny 4 taona (na 5), ​​aorian'izany, manomboka mihena ny kalitaon'ny tsirinaina, ary mihena ny fahafahany miditra amin'ny atody. Amin'ny alàlan'ny 10 taona, ny ankamaroan'ny alika stud dia tsy mamokatra tsirinaina izay hiteraka tsiranoka.
Aostraliana omby Basset alika nanenjika Mix
Ny fatorana dia tranga voajanahary amin'ny fiompiana alika izay mamontsina ny bulbus glandis ny filan'ny lahy ao anatin'ny fivaviana. Ny alika dia mihidy miaraka mandritra ny 15-20 minitra (roa hatramin'ny 30 minitra dia ara-dalàna ihany koa), nandritra izay fotoana nitrangan'ny ejaculation. Navoaka tamin'ny fiandohan'ny kofehy ny tsirinaina, nandritra ny dihin'ny tongotra falifaly (jereo eto ambany). Mandritra ny fatorana dia mamoaka tsiranoka prostaty izy.
Raha vantany vao manidy ny tongony eo ambonin'ilay lamosiny ny alika, dia mamadika vodiny ho vody izy ireo ary mihidy foana. Mamatotra.
Ny miraikitra dia mahazatra. AZA asiana ranomandry hampisaraka azy ireo. Ny lehilahy dia tokony hikofoka ary hidona ao anatin'ny vavy mandritra ny roa ka hatramin'ny 30 minitra. Amin'izao fotoana izao raha mahatsapa ny sire sy ny tohodrano amin'ity faritra ity ianao dia hahatsapa ho mikatso. Rehefa maheno olona miteny ianao fa nahazo fatorana 13 minitra dia midika izany fa niara-nihidy nandritra ny 13 minitra izy ireo.
Sarin'ny filahiana lahy misy a fivontosana bulbus mivonto
Manoro hevitra anao ny mba hanaraha-maso akaiky anao ary hilamina. Tsy tianao ny vehivavy lehibe kokoa matahotra sy mikoropaka hampihetsiketsika ny lahy amin'ny filahiany, satria ho maratra izany ary mety hiteraka tsy fahombiazan'ny fiompiana miverimberina. AZA manandrana misaraka. Aleo miakatra eo ambonin'ilay gorodona ary milamina. Tsy tianao hikorontana ilay vavy ary manomboka mikorisa. Raha lehibe kokoa noho ny lahy izy dia tena afaka mandratra ny lahy. Tsy afa-manoatra izy ary mijanona tsara foana, miandry. Mijanona am-pahatoniana matetika ny lahy dia alao antoka fa manao toy izany koa ny vavy. Ny vehivavy sasany dia mitomany amin'ny toa fanaintainana, ny sasany maniry mafy ny ho afaka, ny sasany toa miandry am-pitoniana fotsiny.
Aorian'ny famatorana dia tsara ny tsy avela hiondrika mandritra ny 15 minitra ny tohodrano, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manamarina ny lahy, ary alao antoka fa niverina tao anatiny ny filahiany ary tsy nokendaina volo na nongotana.
'Vao nanao fatorana tamin'ny mpiompy vaovao te hijery aho. Ny tena nanaitra azy dia ny fikorontanan'ilay tohodrano voalohany izay mety hampanahy azy. Saingy rehefa nahita ahy nipetraka tamin'ny tany izy ary nampitony azy ary avy eo nahatsapa fa tsy maintsy ho ara-dalàna izany satria tony aho, FALY SOOOOOOO izy nahita ilay izy ka tsy taitra izy, toy ny hoe raiki-tahotra izy, mety ho ireo alika horohoro.'
Ny ankamaroan'ny alika dia mijoro amin'ny fatorana ary zava-dehibe ny tsy hamelanao ny hadivory hanodinkodina na hikorontana loatra ka handratra ny lahy, fa ity tohodrano manokana ity kosa dia miziriziry mandry eo an-damosiny.
Raha tsy fantatrao izay hataon'ny olon-droa rehefa voahidy izy ireo dia manome soso-kevitra fatratra fanaraha-maso 100% aho rehefa mivady. Fifamatorana araha-maso fotsiny no ataoko .... Fanaraha-maso 100% .... Mety hitranga ny lozam-pifamoivoizana.
Aorian'ny fisarahana dia mihatakataka izy ireo, miaraka amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo, mandritra ny 24 ora farafahakeliny hamelana ny tsirinaina hiarina indray.
Miaraka amin'ny lahy tanora kokoa (latsaky ny efa-taona) dia ampy ny 20 ora, fa amin'ny lahy antitra kosa dia mety te hitombo 30-36 ora ianao amin'ity indray mitoraka ity.
Fahendrena ny mijery amin'ny mpitsabo anao. Afaka maka santionany amin'ny lahy izy ary manamarina hoe mahavokatra izy na raha tsy miteraka.
Raha ambany ny haavon'ny tsirinaina ao aminy, dia tokony hiditra amin'ny famolavolana fandaharam-pirazanana ianao.
Mahazo alika avy amin'ny raim-pianakaviana roa ve ny tohodrano iray izay niaraka tamina tovovavy mihoatra ny iray nandritra ny hafanana tokana?
Valiny: Eny, rehefa misy tohodrano miaraka amina tovovavy mihoatra ny iray, dia samy afaka mampiteraka ny vavy amin'ny fotoana iray ny zana-kazo roa. Pups avy amin'ny fako tokana dia mety manana ray samy hafa, satria ny tsirinaina avy amin'ny raim-pianakaviana roa dia hilomano, miandry ny masaka atody. Ny tsirinaina avy amin'ny raim-pianakaviana roa dia honina ao amin'ny tohodrano mandritra ny dimy andro.
Purebred Yorkshire Terrier sy Chorkie (Yorkshire Terrier / Chihuahua mix) teraka tao amin'io fako io ihany
ENY, ny vavy no hamaritra ny haben'ny fako.
ENY, ny alika stud dia mamaritra ny maha-lahy na vavy ny alikakely.
'Ity fako ity dia vokatry ny hadisoana rehefa a Chihuahua lahy tratra a Yorkie vehivavy tamin'ny fiandohan'ny hafanany. Ny lehilahy Yorkie dia nanambady azy koa. Ao amin'io fako io ihany no ananantsika a Chorkie vehivavy sy lehilahy Yorkie madio! Mahafatifaty! Valo herinandro izy ireo ao amin'ilay sary. '
Nahazoana lalana avy tamin'i Wilkinsons Dream Kennel, Espana
Mucus Plug amin'ny alika
Kitapo alika Puppy
Ny fizarana cesarean vonjy maika dia mamonjy ain'alika
Pups 3 Herinandro: Fotoana hanombohana fiofanana vilany
Mihetsiketsika kely ho an'ny alika kely amin'ny filokana
Alika kely alohan'ny fotoana
Vokatra amin'ny alika kely
Pejy misy sary amin'ny famelomana sy ny fiompiana alika kely
Kely Palate Cleft
Na dia ity fizarana ity dia mifototra amin'ny whelping of an English Mastiff , izy io koa dia misy fampahalalana tsara momba ny alikaola amin'ny alika lehibe. Azonao atao ny mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny whelping ao amin'ireo rohy etsy ambony. Ny rohy eto ambany dia mitantara ny tantaran'i Sassy, ​​Mastiff anglisy. Manana toetra mahafinaritra i Sassy. Tia olona izy ary tia ankizy. Na izany aza, ny Mastiff malefaka amin'ny fomba rehetra sy mahafinaritra, Sassy, ​​dia tsy ny reny tsara indrindra amin'ireo zanany alika kely. Tsy mandà azy ireo izy fa hikarakara azy ireo rehefa apetraky ny olona azy io hohanin'olombelona, ​​na izany aza tsy hanadio ireo zanak'alika izy na hijery azy ireo. Toy ny hoe tsy zanak'alika izy ireo. Ity fako ity dia mahazo ny rononon-dreniny miaraka amina fifandraisan'olombelona lehibe, manome tanana azy ireo tsirairay avy izay ilaina. Ho setrin'izany, ireo zana-kazo dia hatao lehibe indrindra amin'ny fiaraha-monina ary hanao biby fiompy mahatalanjona, na dia mahagaga aza ny asa tafiditra. Mila mpiompy voatokana iray mba hitandroana ny fahasalamana hatrany. Soa ihany fa manana an'io ity fako ity. Vakio ireo rohy eto ambany hahazoana ny tantara feno. Ireo pejy ao anatiny dia misy fampahalalana marobe izay azon'ny rehetra ankasitrahana sy ahazoana tombony.
Fandraisana an-tanana sy fiompiana alika kely: lehibe 1 ka hatramin'ny 3 andro
Fiompiana alika kely 10 andro plus plus +
Fiompiana alika kely 3 herinandro - fotoana hanombohana fiofanana vilany
Tabilaon'ny fandrosoan'ny alika (takelaka .xls)
Puppies Puppies Mysti Kiobàna: Plug Mucus Fenony feno - 1
Kupa Mysti Puppies: Tantara momba ny asa 3
sarin'ny mix amerikana bulldog pitbull
tertera voalavo mainty sy volontany